Dawladda Imaaraadka Carabta oo wadda qorshe cunaqabataynta hubka looga qaadayo Somaliya. – Radio Daljir
Juunyo 30, 2011 12:00 b 0
Dubia, June 30 – Dawladda wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa wada qorshe ay ku dooneyso in Somalia looga qaado xayiraada dhanka hubka ee saaran, waxana wasaaradda arimaha dibadda ee dalkaasi u xusulduubeysaa sidii ay ugu qancin lahayd wadamada ay saaxiibadda yihiin in la qaado cunaqabataynta hubka ee saaran somalia tan iyo sanadkii 1992dii.
Hadaba iyadoo caalamku ku mashquulsanyahay arimaha burcadbeedda iyo kooxaha mintidka ah ee Somalia ayaa wadanka Imaaraadka carabtu ku dadaalayaa sidii loosoo afjarilahaa xayiraada hubka ee saaran Somalia oo 20 jirsatay, waxana uu Imaaraadku ku xodxotay dalka India sidii uu ugala shaqaynlahaa soo afjarida cunaqabataynta hubka ee Somalia.
Dawladda India ayaa dhinaceeda ka gaws-adaygtay qorshahaasi iyadoo ku dooday in hay?adihii dowladnimo ee Somalia aysan jirin sidaa daraadeedna loo baahanyahay in cunaqabataynta hubka ee Somalia sii socoto.
Kulan dhexmaray wasiir arimada dibadda ee d India SM Krishna iyo dhigiisa Imaaraadka Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan oo dhacay 26kii ilaa 27kii bishaan aan ku jirno ee June ayaa waxa wasiirka khaarijiga ee Imaaraadku u sheegay dhigiisa India in loo baahanyahay in ciidamada Somalia La qalabeeyo si ay awood ugu yeeshaan in y jebiyaan kooxaha burcad badeedda ah, waxana uu intaa ku daray in marka la qaado cunaqabataynta ee Somalia ay ciidamada amaank ee Somalia helayaan tababaro heer sare ah , laakiin dowladda India ayaa ku adkaysatay in la dagaalanaka burcadnadeeddu uu u baahanyahay iskaashi iyo iskudubaridid caalami ah.
Gudiga kormeerida xayiraada hubka ee Somalia ayaa ku eedeeyey dalal carab ah in ku xadgudbeen cunaqbataynta hubka ee Somalia.
Garowe: Khudbadii M/weyne Faroole ee xuska 1-da July, maalinta Qaranimada Somaliya.